Shiinaha Soosaarayaasha Bullaacadda Bullaacadda Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | KAIQUAN
Taxanaha WL ee bambooyin bullaacado oo toosan ayaa inta badan loo adeegsadaa injineernimada degmada, dhismaha dhismaha, bullaacadaha warshadaha iyo daaweynta bullaacadaha. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu shubo bullaacadaha, biyaha wasakhda ah, biyaha roobka iyo bulaacadaha magaalooyinka oo ay ku jiraan qurubyo adag iyo fiilooyin dhaadheer oo kala duwan.
Qulqulka: 10-4500m3 / saacaddii
Madaxa: Ilaa 54m 3. Heerkulka dareeraha ah ＜ 80ºC ，
Qiimaha PH: 5 ~ 9
Heerka dareeraha waa inuusan ka hooseyn kan: Astaanta “▽” ee lagu muujiyey jaantuska cabbirka cabbirka.
Mishiinku kuma isticmaali karo inuu ku maareeyo dareeraha daxalka adag ama walxaha adag .:
Dhexroorka adkaanta dareeraha ayaan ka badnayn 80% cabbirka kanaalka socodka ugu yar ee bamka: Dhererka firidhada dareeraha ahi waa inuu ka yaryahay cabbirka soo saarida bamka.
WL (7.5kw-) Taxanaha Mashiinka Bulaacadaha Taagan CN
WL (11kw +) Taxanaha Mashiinka Bulaacadaha ee CN
Faa'iidooyinka Mashiinka Bullaacadda ee taagan
1. The designe gaar ah ee impeller-laba-channel, jirka bamka waasac, fududahay in la mariyo walxaha adag, fiber ma fududa in la isku laabo, ugu haboon ee qaadista ee bullaacad.
2. Qolka shaabadu wuxuu qaataa naqshada qaabdhismeedka wareega, taas oo ka hortagi karta nijaasta wasakhda inay gasho shaabadda mashiinka illaa xad; Isla mar ahaantaana, qolka wax lagu xiro waxaa lagu qalabeeyaa qalabka waalka qiiqa. Ka dib markii bamka la bilaabo, hawada qolka wax lagu xidho waa la tirtiri karaa si loo ilaaliyo shaabadda farsamada.
3. Bamku wuxuu leeyahay qaab-dhismeed toosan, oo fadhiya meel yar; Qalabka wax lagu dhejiyo ayaa si toos ah loogu rakibay mashiinka mashiinka, iyada oo aan la isku xidhin, mashiinku wuxuu leeyahay cabbir guud oo gaaban, qaab dhismeed fudud, oo sahlan in la ilaaliyo; Qaabdhismeedka sicirka macquulka ah, canterver impeller gaaban, qaab-dhismeedka dheelitirka xoog axial, samaynta dhalista iyo shaabadda farsamo badan oo lagu kalsoonaan karo, iyo mashiinka si habsami leh u socda, buuqa gariirka waa yar yahay.
4. Mashiinka ayaa lagu rakibay qolka bamka qallalan si loogu fududeeyo dayactirka.
5. Marka loo eego baahida isticmaaleyaasha, waxaa lagu qalabeyn karaa kabadh koontarool koronto ah iyo beddelaad heer dareere ah, taas oo aan si toos ah u xakameyn karin bilowga iyo joojinta mashiinka iyada oo loo eegayo isbeddelka heerka dareeraha, iyada oo aan lahayn kormeer gaar ah. , laakiin sidoo kale hubi hawlgal ammaan ah oo la isku halleyn karo ee mootada, taas oo aad ugu habboon in la isticmaalo.
Hore: XBD Bamka Dab-demiska
Xiga: Qodista Bamka Bullaacadaha Oo La Quusin Karo
Jaantus Qaab Dhismeedka Bullaacad Bullaacad ah
Shaxda iyo Sharaxaada Muuqaalka Muuqaalka Bullaacadaha Bullaacadda